यो वर्ष भारतमा आउँदैछन् यस्ता विद्युतीय गाडी :: एजेन्सी :: Setopati
यो वर्ष भारतमा आउँदैछन् यस्ता विद्युतीय गाडी
नयाँ दिल्ली, पुस २९
विगत केही वर्षदेखि विद्युतीय गाडीको माग बढ्दो छ। गाडी निर्माता कम्पनीहरू विद्युतीय सवारी साधन निर्माणमा सक्रिय छन्। यी विद्युतीय गाडीहरू वातावरणमैत्री हुनुका साथै यसको प्रयोग विभिन्न तरिकाले फाइदाजनक छ।
बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेसँगै उपभोक्ताको आकर्षण विद्युतीय सवारी साधनतर्फ ढल्किएको देखिन्छ। भारतमा मात्रै सन् २०२१ मा विभिन्न ब्रान्डले आफ्नो विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्‍यो। भारतीय अखबार दैनिक भास्सकरका अनुसार कम्पनीहरू सन् २०२२ मा थप विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।
भारतको इलेक्ट्रिक भेहिकल सोसाइटीले सन् २०२२ मा भारतीय बजारमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने दाबी गरेको छ। सन् २०२२ मा सार्वजनिक हुने केही विद्युतीय गाडीहरू यस प्रकारको छः
१. विद्युतीय अल्ट्रोज
टाटा मोटर्सले सन् २०२२ मा विद्युतीय अल्ट्रोज सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। सन् २०२० मा सार्वजनिक विद्युतीय नेक्सनको सफल बजार विस्तारपछि कम्पनीले विद्युतीय अल्ट्रोज सार्वजनिक गर्ने बताइएको हो। विद्युतीय अल्ट्रोज जिपट्रोन प्रविधिमा आधारित हुनेछ। यसले एक पटकको पूरा चार्जमा २५० देखि ३०० किलोमिटरको माइलेज दिने अनुमान छ।
२.बिएमडब्लु आई ४
बिएमडब्लु यतिबेला भारतमा आफ्नो दोस्रो विद्युतीय कार आई ४ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। यसले भर्खरै भारतमा आइएक्स विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गरेको हो। बिएमडब्लु आई ४ को ब्यट्री एकपटकको पुरा चार्जमा ४५० किलोमिटर भन्दा बढीको माइलेज दिने अनुमान छ।
३. भोल्भो एक्सी ४० रिचार्ज
भोल्भो एक्सी ४० रिचार्ज सन् २०२१ को जुलाईमा सार्वजनिक हुने तयारीमा छ। यसमा ७८ किलोवाटको ब्याट्री छ। यो एक पटकको पूरा चार्जमा ४१८ किलोमिटरसम्मको माइलेज दिने अनुमान छ।
४. मिनी कुपर एसई
मिनी कुपरलाई एसई सन् २०२२ को पहिलो ६ महिनामाभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। यसमा भएको ३२‍.६ किलोवाट ब्याट्रीले एक पटकको पुरा चार्जमा २७० किलोमिटरसम्मको माइलेज दिन्छ।
५. महिन्द्रा इकेयुभी १००
यो गाडी महिन्द्रा केयुभी १०० को डिजाइनसँग मिल्दोजुल्दो छ। ग्लोबल चिप अभावका कारण इकेयुभी १०० सार्वजनिक हुन ढिलाई भएको कम्पनीले बताएको छ। यो गाडी सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिक मै सार्वजनिक हुने तयारीमा छ। यो गाडीमा १५.९ किलोवाटको ब्याट्री क्षमता छ।
६. टाटा विद्युतीय टियागो
सन् २०२२ मा टाटा मोटर्सले विद्युतीय अल्ट्रोजसँगै टाटा विद्युतीय टियागो पनि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। यसको डिजाइन हालको टाटा टियागो कार जस्तै हुने बताएको छ।
रेनो गाडीले भारतमा आफ्नो पहिलो विद्युतीय कार जोयलाई यही वर्ष सार्वजनिक गर्दैछ। यो गाडीलाई पहिलो पटक सन् २०२० को अटो एक्सपोमा प्रदर्शन गरिएको थियो। यसमा जडित ५२ किलोवाटको ब्याट्रीलाई एक पटक पूरा चार्ज गर्‍यो भने अधिकतम ३ सय ९४ किलोमिटसम्मको माएलेज दिन्छ।
८. मर्सिडिज बेन्ज इक्युएस
मर्सिडिज बेन्ज इक्युएस लोकप्रिय एस संस्करणको विद्युतीय गाडी हो, जुन सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमासिकमा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। गाडीमा १०७.८ किलोवाटको ब्याट्री जडित छ। जसले एक पटकको पुरा चार्जमा ७ सय ७० किलोमिटरसम्मकाे माइलेज दिन्छ।
९. टाटा सियरा
टाटा मोटर्सको सबैभन्दा उत्कृष्ट कारमध्ये सियरा पनि पर्छ। यो पहिलो पटक २०२० अटो एक्सपोमा प्रदर्शन गरिएको थियो। कम्पनीले यो विद्युतीय सियरा गाडी २०२२ मा भारतीय बजारमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।
१०. रेनो के जेडई
२६.८ किलोवाटको ब्याट्री हुने रेनो के जेडई पहिलो पटक सन् २०२० को अटो एक्सपोमा प्रदर्शन गरिएको थियो। यो गाडीको मूल्य रेनो जोईभन्दा बढी हुने अनुमान छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ३०, २०७८, ११:४८:००
टाटा टिगोर अब विद्युतीय सेडान सेग्मेन्टमा
भारतमा सार्वजनिक भयो २०२२ केटिएम २५० एड्भेन्चर
भारतमा बढ्यो निशान म्यागनाइट र किक्सको मूल्य